Tim Cook na-ezute Prime Minister nke India, mgbe o kwusịrị na ha ga-emeghe Apple Store na mba Eshia. | Esi m mac
Apple chọrọ imeri ụwa, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ tupu ndị na-agba ya aka. Agbanyeghị, na mba niile anaghị anabata otu oriri. India bu ahia mara nma nye ndi n’ere ahia obula. Ọ bụ nnukwu ahịa, ọtụtụ ndị si mba dị iche iche ekpebie ị ga-enwe isi ụlọ ọrụ ha ebe ahụ, na-eji uru mmefu dị ala.
Taa anyị mụtara na Sunday gara aga na Apple CEO zutere Prime Minister India Narendra Modi, imechi nkwekọrịta ga-eme ka isi obodo na ọrụ na-arụ ọrụ na mba ahụ bawanye. Na akụkụ nke Apple, ọ ga-erite uru site na mmụba nke ahịa n'ụwa niile.
Ma imechi nkwekọrịta ahụ adịghị mfe. Iji mepee ụlọ ahịa na mba ahụ, akara ọ bụla ga-ewepụta opekata mpe 30% nke ngwaahịa ya na mpaghara mpaghara. Atụmatụ mmepụta Apple na India dị na nke mbụ ma ekwughi na ọ ga-eru 30% nke nrụpụta karịa ire ere na obere oge. Agbanyeghị, gọọmentị India na-enyocha mbọ na ezi okwukwe ụlọ ọrụ nyere.
Aghọrọ Cook bụ igosi ọrụ ị na-ezube ịmepụta na mba ahụ, nakwa ha mmekorita gburugburu ebe obibi. Cook gosiri ya atụmatụ ndị Apple rụrụ na mba ndị ọzọ dịka ihe atụ ịgbaso na Eshia.
Cook kwughachiri na Apple mepụtara ọrụ 740.000 na India site na nke a na-akpọ "ngwa akụ na ụba" na ndị mmepe India mepụtara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100.000 ngwa ahịa ngwa ahịa.
N'ime nzukọ ahụ, Cook kpughere Apple na-atụ anya ka arụmọrụ ya na India na-agba ọsọ kpamkpam na ume ọhụrụ, na oge ndekọ nke ọnwa isii. India ga-enye ụlọ ọrụ ahụ uru uru ụtụ apụl na-ada na mbubata ngwa ahịa.
The Apple ọrụ-enweta nkwanye na mma oru ọrụ ma ọ bụrụ na ọ bụ na India. Uru Apple, ahịa dị ka India, ga-ebufe akụkụ nke uru ndị ọhụrụ na ngwaahịa na ọrụ Apple ọhụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Tim Cook na-ezute Prime Minister nke India, mgbe o kwusịrị na ha ga-emeghe Apple Store na mba Eshia.
8x38 Podcast: Mmetụta nke Sọftụwia Ọhụrụ Apple